Oromia Media Network: Oolmaa Oromiyaa – Kichuu
OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) Dec 19, 2017
OMN: Oduu Muddee 19/2017
Ummanni Oromoo roorroo sirni abbaa irree Wayyaanee isarraan gahaa jiruuf Ummata okkolee hin beeknee fi Saba haqaa fi mirga isaa kabachisiisuudhaaf diina isaa sakaalee toftaan irra aanuun jijjirama gaarii biyyattii keesatti mullisaa jiruudha.
Shirri Ummata Oromoo fi sabaa sablammoota biraa walitti buusuuf diinni kun xaxaa jiruus harkatti fashalaawurratti argama.
Dadammaqiinsi Oromootaa fi lammiileen biyyattii horataniis kanaaf ragaadha.
Ajjeechaa jumlaa sirni Wayyaanee ilmaan Oromoorratti raawwataa jiru mormuun Godina Iluu abbaa booraa magaalaa Mattuutti hiriira guddaa kaadhimamtoonni koolleejii Barnoota barsiisoota Mattuu fi hawaasni magaalattii gaggeessaa jiraachuun gabaafameera.
Jiraattoonni, gochi mootummaan biyya bulchaa jiru raayyaa ittisa isaatti fayyadamuun hawaasa nagayaarratti raawwate akkaan kan isaan dallansiise tahuu himanii, humnoonni gara jabummaan gocha suukanneessaa kana dhaqqabsiisan tohannoo jala oolfamanii seeraaf dhiheeffamuu akka qaban gaafataniiru.
Hiriira dallansuun guuttame kan qaama hawaasaa mara hirmaachise kanarratti bulchaan Godina Iluu abbaa booraa Obbo Namarraa Bulii argamuun ajjeechaan Lammiilee Oromoorratti raawwatamee fi gaggeeffamaa jiru kan isaan gaddisiise ta’uu himanii,Mootummaan Naannoo Oromiyaas humnoota kana seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jira jedhan.
Barattoonni hiriira kanarratti argamaniis ejjannoo barnoota keenya daqiiqaa takkaafillee osoo adda hin kutin, barachaa qabsoyna, qabsaawaa barana murtoo jedhurra gahuu dubbataniiru.
Baratootaa fi hirmaattoonni hiriirichaa marti dhaadannoo ajjeechaan lammii keenyarraa haa dhaabbatu, Qaamni humna waraanaa hayyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin ala Oromiyaa keessa galche haa gaafatamu, Raayyaan ittisa Wayyaanee Oromiyaa keesaaa haa bahuu fi kkf dhageessisaa oolaniiru.
Hiriirri kun nagayaan jalqabee xumuramuufis hirmaannaan Foollee fi Poolisii Oromiyaa guddaa tahuun himameera.
Gama biraatiin godinuma kana aanaa Bureetti konkolaachisaan miseensa raayyaa ittisa Wayyaanee tahe Zayita Seeraan alaa Mootummaa Naannoo Gambeellaarraa fe’uun osoo Gara Magaalaa Goreetti imalee faayidaa hin malle argachuudhaaf (qarshii 20,000 fudhachuuf) wayta imalaa jirutti, aanaa Buree iddoo addaa keellaa jedhamutti gaafa muddee 15/2017 halkan keessaa naannoo sa’aa 5:20 tahutti odeeffannoo hawaasarraa argameen poolisii Oromiyaatiin tohannoo jala oolfamee hidhaa fi adabbii maallaqaan adabamee jiraachuun ibsameera.
Magaalaa Bureetti kontorbaandistoota qabeenya Ummataa duguugan ugguruun akka amaleeyfatamtu jiraattoonni dhaamanii, Zayitiin seeraan ala miseensa raayyaa ittisaa kanarraa fuudhames hawaasa aanichatti gurguramee galiin isaa lammiilee Oromoo qe’ee fi qabeenya isaaniirraa Wayyaanee fi MNS tiin buqqaafamaniif akka oolu manni murtii aanichaa murtee dabarseera.
Himatamaan kun ajajaa dhibbaa Melkineeh Haayiluu konkolaachisaa raayyaa Ittisa biyyaa hoggaa tahu seeraan ala Konkolaataa Raayyaa Ittisaa lakkoofsi Gabatee isaa መ.ከ 04817 taheen Zayita seeraan alaa baay’inni isaa jaarikaana 320/Liitirii 6400 ta’u fe’eetiin deemaa ture.
Manni Murtii Aanaa Burees galmee Murtoo ariifachiisaa jedhamuun beekkamuun dhaddacha akka lakk. habashaa gaafa guyyaa 7/04/2010 ooleen dhimmicha irratti raga bitaa fi mirgaa laaluun himatamaan himanni itti dhiyaate waakkii tokko malee yakka hojjate waan amaneef hidhaa waggaa lamaa fi baatii lama akkasuma qarshii kuma diigdamaan adabeera.
Zeeyitni qabame tilmaama qarshii 153,600 kan baasu wayta tahu,eerumsa hawaasni taasisee fi hordoffii Poolisitiin qabeenyi kun too’annoo seeraa jala ooleera.